Vũ Waaqayyoof trong hojjenna -- Nuyi Waaqayyoon waaqefanna
← Chúa Giêsu Kitô Dinqiisiisaa
Bảy Waaqayyo về ISAAA biyya garbumma keessa IRRE jaban basa Mature. Amma trầm JIRA. Saba waliin nhau eegaa ture ta'un. Tượng eegaa Jira. Bảy immo về ISAAA irra amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu Akka Akka Waaqayyoof các qesu.
Maree: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe Maal fakkataa? Gegg Essa fi garummma bên trong siif godhe kanaf kan SII irra eegamuu Maal Jetta?
MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo ta'u hinaafaa isa isa có không rritti mee Chitti yaadii.
SEENSA: Bảy Iyaasuun Isra'el geggesse biyya Akka dhalaniif Waaqayyo isaan abidachiisen Erga ga'e Booda yeroo dhuma ăn irra deebi'e the'ee dubbi Waaqayyo isaan yaadaachiisa. Dhiimi Waaqayyoof isa fi hojjechuu các qesuu kun Akka hin dhiima layyo tahin về ISAAA qoqobata. Mee Iyyasuu 24:14-24TTI waliin Nhưng các dubbisinu.
16Yommus Jarni deebisanli, "Waaqayyoon dhiifnee qayyoTii biraatllf hojjechuun nuttii Nhưng fagaatu! 17Waaqayyo gooftaa keenya; inni nuyi, abboota keenyas thừa kế garbummaa biyya Gibxii baaseera, ISNA gurguddaa năng lượng milikkita keenya dumatti godheena, là keenya bị còi cọc Irratti, đuôi keessa darbine hundumaa gidduattis underdog Nu eegeera. 18Waaqayyo 7 inni bị còi cọc, Amoorota Achi turanis Duran oofee baase Waaqayyo keenyn ảo tưởng ta'eef, Vũ isaaf trong hojjenna "jedhan.
19 Jyaasuunis sabaan, "Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan, Innis Waaqayyo isa qulqulluu DHA, inni Waaqayyo hinaafaa Udhas; Innis irra-daddarbaa keessanii trong eubbuu keessan isiniif thời gian dhilsu. 20Waaqayyoon dhiiftanii ormaatiif yoo hojjettan qayyolii, Dun có thẩm quyền isa gaaril isiniif godhe, Wanta deebi'ee immoo giữ isinitti fidee ISIN trong fixa Haman "jedhe. 21Jarri garuu deebisanil Iyaasuudhaan, "Lakkii! Vũ Waaqayyoof trong hojjenna "jedhan. 22 Ammas Iyaasuun jaraan, "ISIN Waaqayyoof trong hojjenna-isa jettanli fo'achuu keessaniin ofli keessan irratti dhugaa trong baatu" jedhe; isnanis, "Eyyeel Nuyi dhugaa trong Baana!"Jedhanii trong deebisanilf. 23Chicken imratti lyaasuun jaraan, "Amma Egaa waaqayyolii ormaa cảnh báo các nước láng giềng gidduu ISIN có imnaa deebi'aa!Garaa keessanis lộng lẫy gooftaa Waaqayyo một kan Israa'elitti deebisaa!"Jedhe. 24Jarris Iyaasuudhaan, "Waaqayyo gooftaa keenyaaf trong hojjenna, isaafis trong abboomanma "jedhan.
(Các. 14) Waaqayyoon sodaachuu jechuun Maal jechuu DHA? Mộtmanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjechuu jechuun woo?
Durra Isra'el Iyyasuu Fillanno Saba kA (các. 15) fillanno make attamitti? Hara'a nuuf hiika Maal qaba?
Debbii sabni debbise mee irra dedebi’e illalii (các. 16-18). Debbiin kun Maal SII barsiisaa?
Iyyasuun maaliif Chitti 7 fufe như qoqobata (các. 22)?
Murtoo Iyyasuu fi murtoo saba (các. 23 là 24) mee xinxalii. Maal irra Barata?
Waaqayyoof hojjechuun dubbi salpha cây. Gaatii namaa basisaa-Sheerah Ba'uu 20:5 là 34:14 mee qoradhuu.
Jechi "sodaa" jedhame nổi loạn olitti "Waaqayyoon sodaadhaa" Soda kun về ISAAA rafaamu duwwa agarsiisuu chỉ hin fi ta'ne caalatti Waaqayyoon kabaju ulfina kennuf ilallata.
Jechi "hojji" jedhamu nổi loạn olitti "Waaqayyoof hojjedhaa!"Kun Waaqayyoof hojjechu, ISAF sagaduu ("Thờ phượng") jechuudhaas.
Theo hòa bình ayyanaa fi araraa Waaqayyo duwwan fuula Waaqayyootti qaajeela ta'e fi ngọt dhabachuu argata. Jireenya Waaqayyo araraa isa irra có thể ka'ee Namaa badhase theo hòa bình immo sodaa fi amanamamumman keessa CN irra jirachuutu eegama.
Hin Jireenyi akkasi dubbi layyo kun chỉ hòa giải dubbi Chitti cichuu mềm dẻo gaafatu DHA. Waan Nama tokko gammachiisuuf học jedhani qosatti ITTI Galan ykn eegalan Ta'u thời gian Qabus. Murtoo ciima mềm dẻo gaafata. Waaqayyo inni Waaqayyo araara ta'e kun Waaqayyo isuma Waaqayyo hinaafaa Udhas. Waaqayyo cubbu không eenya waliin hin fi I matu.
Vũ Waaqayyoof trong hojjenna — 3 Bình luận
Tamirat Teshome Dekebo trên Tháng Sáu 25, 2017 khi 10:57 tại nói:
Ararso Korsa trên Tháng Tư 11, 2017 khi 4:57 pm nói:
Misganu Gadisa trên Diễu hành 23, 2015 khi 10:00 tại nói: